Masar iyo Suadan oo gaashanka ku dhuftay qorshe ay wado Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirada Arrimaha Dibedda ee dalalka Masar iyo Sudan waxay shalay Kulan Xasaasi ah ku yeesheen caasimadda dalka Masar ee Qaahira.
Haweeneyda Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalka Sudan, Drs. Maryam Saadiq Almahdi waxay shalay booqashadii ugu horeysay ku tegtay Qaahira, iyadoo la kulantay Wasiirka Arrimaha Dibedda Masar, Samiix Shukri.
Kulankaasi waxay labada Wasiir ku lafa-gureen Go’aanka Dowladda Ethiopia ku doonayso inay markii 2-aad buuxiyaan Biyo-xireenka weyn ee Dib-u-curashada Ethiopia ee laga dhisayo Deegaan 15-KM u jira Xuduudka Sudan.
Dowladaha Masar iyo Sudan waxay Go’aanka Ethiopia ku tilmaameen mid Hal dhinac ah oo khatar gelinaya Danaha Guud ee labadooda dal.
Mowqifka Masar iyo Sudan waxaa lagu muujiyey War-saxaafadeed laga soo saaray kadib, markii uu soo idlaaday Kulankii Wasiir Samiix Shukri iyo Wasiirad Maryam Saadaq Al-mahdi ku yeesheen Qaahira.
Drs. Maryam Saadaq Almahdi oo xilka Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalka Sudan loo magacaabay bishii la soo dhaafay ee Feberaayo waxa la filayaa inay ka qeyb gasho Kulanka Wasiiradda Arrimaha Dibedda ee dalalka xubnaha ka ah Ururka Jaamacadda Carabta oo maanta ka furmi doona magaalladda Qaahira.